Product Name Dual Pulse TENS Massager Model JCS1006 Power Supply Rechargeable MOQ 1 Customized Available Function Massage, ခူး, ခြယ်လှယ်, acupressure, ခတ်, strike Time control Voice function can be turned on or off freely Can be used on neck, back, leg, waist, arm, foot etc. massage the whole body. Body…
﻿ This ems wireless muscle stimulator by imitating the pulse micro-current of human body fiber to make acupoint movement helps to eliminate fatigue. သွေးလည်ပတ်မှုမြှင့်တင်ရန်, eliminate muscle pain, and so on. အခြား EMS massager နှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် 3D နည်းပညာကိုသုံးသည်, feel better. …
﻿ This healthmateforever electronic pulse massager isavery portable pulse massager machine, အားသွင်းစရာမလိုပါ, ဖုန်းထဲမှာ plug သို့မဟုတ်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးကိုသုံးနိုင်သည်, လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်, သုံးခလုတ်ထိန်းချုပ်မှု,6mode ကိုရွေးချယ်ရေး, 12-အဆင့်ကိုပြင်းထန်မှုညှိနှိုင်းမှု. Which internally generates pulse waves of different…
Tens muscle simulator isakind of pulses produced by potable simulator used to cheat pain, အချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ strain နှင့်နာကျင်မှုသည်. Wonderful combination of different pulse singles will make you enhance the true feeling of massager,ခူး, ခြယ်လှယ်,acupressure, ခတ်, stroke. Helps relief fatigue,enhance circulation system of…